သိချင်တာလေး...... - MYSTERY ZILLION
November 2011 edited November 2011 in Networking
ကျနော်ကခု ကျနော်.အင်တာနက်ဆိုင်မှာ TP Link model no TL-WA5210G (CPE) သုံးလုံးထောင်ထားပါတယ်
ပြီးတော. clients တွေကိုဘယ်လိုမျိုးထိန်းချုပ်ရမလဲ။
[email protected] ကိုဖြစ်နိုင်ရင်မေးလေးပို.ပြီးတော.ဖြစ်ဖြစ်ဖြေကြားပေးကြပါနော်။
I can help you. you can contact- 05257088 & [email protected]